Company Okwu Mmalite-Ningbo COFF Machinery Co., ltd
ụlọ Brew & Pilot System
Budata broshuọ PDF Download Broshọ TXT
Kpọtụrụ anyị maka enyemaka
Ekwentị: + 86 13819801855
Tinye: Mpaghara Mmepụta nke Luojiang, Obodo Hemudu, Yuyao Ningbo City, China
Ningbo COFF Machinery Co., Ltd bụ a top ọkachamara mmebe na emeputa nke elu-edu zuru ezu nka biya brewing akụrụngwa na China na magburu onwe ọrụ.
Anyị na-elekwasị anya n'ichepụta ngwá ọrụ Beer Binging dị elu. Anyị nwere ụlọ ọrụ dị mma maka ịmepụta ụwa nke mbụ na-anaghị agba nchara ụgbọ mmiri maka biya, mmanya, mmiri ara ehi, mmanya, ezigbo ọgwụ, ọgwụ, wdg.
Ngwa ọrụ na ọrụ microbrewery anyị nwere aha dị elu na US, Canada, UK, New Zealand, Australia, Japan, Russia, na mba ndị ọzọ na mpaghara Eurasia. 80% nke ndị ahịa anyị sitere na nkwanye nke onye anyị na ha na-eme. Ihe karịrị 90% nke ndị ahịa na-ewu mmekọrịta ogologo oge mmekọrịta anyị. Nabata ileta ma na-akwado COFF!
Mpaghara mmepụta ihe anyị na-ekpuchi mpaghara nke mita 220 puku. Anyị nwere otu nnukwu ụlọ ọrụ ọkachamara na China na-eme biya ụlọ ọrụ biya. Ọ na-ewe otu elekere na nkeji iri anọ iji si na Shanghai Pudong International Airport ma ọ bụ nkeji iri anọ iji si n’ọdụ ụgbọ elu Ningbo pụta.
Anyị wuru otu ndị injinia na ndị nrụpụta 10, ọkachasị ebe a bụ ndị injinịa ise kachasị elu nwere ihe karịrị afọ 15 na-enyere ụlọ ọrụ aka aka ịmalite ma mepụta ọhụụ n'ọdịnihu.
Ndị ọrụ anyị nwetara ASME weld certificate.
Ngwaahịa anyị nwetara ASME, AS1210 akwụkwọ.
Nkà Mmụta Azụmaahịa